वैदेशिक रोजगार, यौन र अपराध – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
वैदेशिक रोजगार, यौन र अपराध
२०७१ चैत्र १०, मंगलवार ०१:५२ गते
चितवनमा अहिले एउटा आपराधिक घटना निकै चर्चामा छ । त्यो हो, भरतपुरको नारायणी सामुदायिक अस्पतालका चिकित्सकको अपहरण । यो मामिलामा अदालतको अन्तिम ठहर केही आइसकेको छैन । प्रारम्भिक आदेशले अपहरणको अभियोगलाई नै बलियो दर्शाएको छ । यो घटनामा जो जसका विरूद्ध मुद्दा दायर भयो, अदालतले चार जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नै राख्ने आदेश दियो भने एक जनासँग एक लाख रूपैयाँ धरौटी मागेर तारेखमा छाड्यो । अदालतबाट अन्तिम ठहर नआएको हुँदा यससँग जोडिएका विषयको सत्यता प्रमाणित हुन बाँकी नै छ । तर, प्रहरीको अनुसन्धानले जे कुरा बाहिर ल्याएको छ, त्यो भने निकै सोचनीय छ ।
यो घटनाका सम्बन्धमा चितवन प्रहरीले जे–जे विवरणहरु सार्वजनिक गरेको छ, त्यसको केन्द्रमा यौन छ । एक जना युवती छन्, जो हेर्दा आकर्षक छिन् । उमेर पनि धेरै भएको छैन । एउटा सन्तान साथमा छ, तर उनका श्रीमान् विदेशमा छन् रोजगारीका लागि । श्रीमान् विदेशमा हुँदा ती युवती गर्भवती हुन्छिन् । बच्चा जन्माएर मारेको आरोपमा युवती गिरफ्तार हुन्छिन् । उनीमाथि हत्याको अभियोग लाग्छ र जेल पुग्छिन् । श्रीमान् विदेशमा हुँदा कसरी गर्भवती भइन् उनी ? यो प्रश्नमा उनको जवाफ आउँछ । जवाफमा एक जना चिकित्सकको नाम पर्छ ।
प्रहरीको बयानमा ती चिकित्सकको नाम उल्लेख गरेपछि उनले नाता कायम गर्नका लागि अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेकी छन् । अर्थात् ती युवतीसँग जोडिएका दुई मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेलामा उनीविरूद्ध थप अर्को मुद्दा दायर हुन्छ, त्यो मुद्दा हो अपहरणको । उनले जोसँग यौनसम्बन्ध भयो र गर्भ रह्यो भनेर प्रहरीलाई बयान दिएकी छन्, जोसँग नाता कायम गर्न मुद्दा दायर गरेकी छन्, उनै चिकित्सकलाई अपहरण गरेको अभियोग ती युवतीलाई लाग्यो । अदालतले यो अभियोगमा पनि उनलाई कारागारमा राख्ने आदेश दियो । पछिल्लो घटनामा अन्य चार जना पनि मुछिए, जसमध्ये तीन जना पुर्पक्षका लागि कारागार नै चलान भए ।
त्यसरी कारागार पुगेका तीन जनामध्ये दुई जना यसअघि एउटा डाँका मुद्दामा परासी जेलमा सँगसँगै बसेका व्यक्तिहरु रहेको चितवन प्रहरीले बताएको छ । कावासोतीका दुई घर लुटपाट गरेको अपराध प्रमाणित भएपछि दुई जना परासी कारागार पुग्छन् । त्यसमध्ये एक जना केही समयअघि नै छुटेर भरतपुरमा व्यापार व्यवसायका साथै सामाजिक कार्यमा पनि सक्रिय रुपमा लागेका व्यक्ति हुन् । उनीसँगै जेल परेका अर्का व्यक्ति भने केही समयअघि मात्रै जेलमुक्त हुन्छन् । परासीको जेलमै हुँदा ती व्यक्तिले डाक्टरसँग मुद्दामामिलामा परेकी भरतपुर कारागारकी युवतीसँग सम्पर्क राखेका हुन्छन्, चिट्ठीमार्फत । रिहा भएपछि भरतपुर कारागार पुगेर उनीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट नै गर्छन् । अनि, भरतपुरमा व्यापार गरेर बसेका अर्का व्यक्ति जो परासी कारागारमा उनीसँग थिए, त्यसलाई पनि भेट गर्छन् । अनि, भेट्छन् युवतीसँग मुद्दामामिलामा परेका चिकित्सकलाई ।
त्यसपछि उनीहरुले युवतीसँगको मुद्दा मिलाइदिने भन्दै चिकित्सकसँग पटकपटक गरेर १३ लाख रूपैयाँ फुत्काए । उनीहरुले पैसाको माग अन्त्य गरेनन् । गएको फागुन ३ गते भरतपुरमा बन्धक बनाएरै चिकित्सकसँग अझै लाखौँ रकम माग गरे । प्रहरीले बेलैमा थाहा पायो । मोबाइल लोकेसनका आधारमा भरतपुरको एक होटलबाट बेलैमा उद्धार ग¥यो । संलग्नहरु पनि समातिए । यी विवरणहरु प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो । आरोपितहरुले आफूमाथि लागेका अभियोगहरु असत्य भएको बताउँदै आएका छन् । तर, यो घटनामा श्रीमान् विदेश हुँदा पनि गर्भ बसेको घटना अकाट्य तथ्य हो । त्यसपछि एकपछि अर्को अपराधको जालो जेलिन थाल्यो । त्यसको अन्तिम कडी प्रहरीले भनेको अपहरणसम्मको घटना हो ।
वैदेशिक रोजागारबाट हुने आर्जन नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख पाटो हो । तर, यससँगै जोडिएर आउने केही सामाजिक विचलनका पाटाहरु पनि छन्, जसमा यौन गम्भीर विषय बनेको छ । यौनसँग जोडिएर अपराधसमेत हुन थालेपछि बल्ल यसमा चर्चा हुने गरेको छ । यौनसँग जोडिएका अपराधसम्बन्धी घटना एउटा–दुईवटा मात्रै होइन, धेरै नै हुन थालेका छन् । त्यसैले, समाजले यसबारेमा केही सार्थक पहल गर्नुपर्ने हो, तर त्यो तहको तत्परता छैन । अपहरणको जडमा यौन छ, त्यो पनि लापर्बाही ढंगको यौन व्यवहार । अनि अर्को गम्भीर घटना, यसमा चिकित्सकजस्तो व्यक्तिको नाम मुछिएको छ । यद्यपि, युवतीले चिकित्सकमाथि लगाएको आरोप स्वतन्त्र निकायबाट प्रमाणित भएको छैन, चिकित्सकले पनि आफूमाथिको आरोपको खण्डन गरेका छन् ।
यदि आरोप भोलि प्रमाणित भयो भने नेपाली समाजमा सजग र सचेत भनिएका व्यक्तिहरु पनि कुन हदसम्म लापर्बाही गर्दा रहेछन् भन्ने तथ्य निस्कने छ । लौ, आरोप प्रमाणित भएन भने पनि यो चानचुने विषय हुनेछैन । एउटा ‘सामान्य युवतीले’ चिकित्सकजस्तो प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई ‘अनाहकमा मुछ्ने आँट’ पछाडिको उद्देश्य के हुन साक्ला ? त्यो पाटो केलाउँदा झन् के–के उजागार हुने हो ! तर, हामी त्यो हदसम्म जान खोज्दैनौँ । केही समयको चर्चापछि सबै कुरा बिस्तारै बिर्संदै जाने रोग हामीमा छ । यसलाई सामाजिक समस्या मानेर यसको गहिराइमा जाने र गम्भीर भएर समस्याको जड मेटाउने परिपाटी हामीमा बसेकै छैन ।
वैदेशिक रोजगारी आफैँमा समस्या हो भन्न खोजिएको होइन । तर, यससँग जोडिएर आउने केही नकारात्मक पाटोको व्यवस्थापनमा भने हामी चुकेका छौँ । समाजले त्यसबारेमा पहल गर्नुपर्ने हो । यो घटनामा ती युवतीमा श्रीमान् विदेशमा नभएको भए हत्या र अपहरणसम्मको अपराध हुन सक्दैन थियो भनेर सोच्नेभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको घरमा सुरू भएको ‘यौन’को व्यवस्थापन के–कसरी हुन्छ होला भनेर बेलैमा नसोचे परिणाम घातक बनेर जाने अवस्था आएको छ । विदेश जाने सबैका घरमा यो समस्या छ भन्न खोजेको पनि होइन, त्यस्तो हुने गरेको पनि छैन । तर जहाँ यौनजन्य समस्या छ, त्यसले गम्भीर खालको अवस्था ल्याएको छ । यौन समस्याले पारिवारिक विखण्डन र अपराधसम्म हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा मात्रै होइन, यौन व्यवस्थापन सबै क्षेत्रका लागि आवश्यक विषय हो । समस्या वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुमा मात्रै छैन । त्यसैले यो पक्षमा सरकार, सामाजिक क्षेत्र र नागरिकले सोचेर अगाडि बढ्न आवश्यक